Apple ID Ahoana raha manadino ireo valiny fiarovana isika? | Avy amin'ny mac aho
Apple ID, ahoana raha manadino ireo valiny fiarovana isika?
Ahoana raha manadino ny valin'ny Bokin'i Môrmôna isika fanontaniana momba ny filaminana Inona no nahatonga anay nametraka an'i Apple tao amin'ny fivarotana app? Izany no nanontanian'ny olom-pantatra ahy tato ho ato ary izany no antony tiako hizarana aminareo rehetra ny vahaolana amin'ity "olana" ity, satria amin'izay no hahafantaranay ny fihetsika raha sendra mahazo antsika izany.
Vao tsy ela akory izay dia nanova ny fomba azontsika atao i Apple midira amin'ny kaonty iTunes-nay (fantatra kokoa amin'ny anarana hoe ID) hanovana azy, hanovana azy na hanisy adiresy mailaka vaovao fotsiny, tamin'ity fanovana ity dia nanampy "fanontaniana fiarovana" telo hahafahana manao ireo fanovana ireo, ary ara-dalàna ny fanadinoanao azy ireo.
Aza matahotra fa tsy ianao no ho tonga voalohany aminao ary tsy ho farany ianao. Azo antoka fa rehefa nanao an'ity fanovana ity volana vitsivitsy lasa izay, tsy tadidintsika izay valiny apetrakay amin'ireo fanontaniana mahazatra napetraka. Izao, hiteny ianao izao, mety tsy tadidiko ny valiny napetrako! Andao hojerentsika izany:
Miditra https://appleid.apple.com/ na avy amin'ny pejy fanohanana ny Apple Store Online izahay ary tsindrio ny Manage your Apple ID:
Raha vantany vao natsofoka ny adiresy mailaka sy ny teny miafin'ny kaontintsika, dia hanindry ny tenimiafina sy ny fiarovana izahay:
Eto no angatahany hamaly amin'ny roa amin'ireo fanontaniana telo napetrany taminay volana maro lasa izay, raha fantatsika ny valiny dia tsy hanana olana isika, fa ahoana kosa raha tsy fantatsika izy ireo? Manana safidy roa isika avy eto:
Raha manangana kaonty mailaka hamerenana ianao dia hanana ny safidy eo ambany
Miantso Apple mivantana na mifandraisa amin'ny serivisy fanampiana
Na amin'ireo safidy roa ireo, isika hamaha haingana ny olana. Raha namboarinao tamin'ny mailaka fanarenana ny kaontinao dia hamonjy ilay antso ianao (na dia maimaim-poana aza izany) ary mety hamaha azy haingana kokoa ianao, fa raha ny miantso an'i Apple no safidinao satria tsy namboarinao ny mailaka fanarenana dia tsy handeha izy ireo apetraho aminao izay olanao aorian'ny dingana vitsivitsy vitsivitsy miaraka amin'ny mpanolo-tsaina amin'ny faran'ny telefaona hafa, tsy ho ela dia ho voavaha ny olana.
Fanazavana fanampiny - Voac "Refurbished" voalohany ao amin'ny American Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Apple ID, ahoana raha manadino ireo valiny fiarovana isika?
opapp dia hoy izy:
Ary raha tsy mahazo ny safidy alefa resblaser aho fa raha manana kaonty mailaka fananganana indray aho ???
Mamaly an'i opapp
Io safidy io dia amin'ny teny miafina sy fiarovana. Araho ny lesona ilainao avela.
Afaka miantso foana ianao handefasana ny mailaka indray. Nijery spam ve ianao ary inona koa?
Ann dia hoy izy:
Tsy azoko atao ny mamerina azy na dia manaraka ny dingana rehetra ao amin'ny lesona aza aho ary manana ny mailaka faharoa
Mamaly an'i ann
Mbola hafahafa ihany raha tsy mivoaka ny safidy ann, manandrama miantso an'i Apple ary azoko antoka fa hamaha izany vetivety izy ireo.
Luis Pantoja dia hoy izy:
Tsy azonao atao ve ny milaza aminay ny tokony hatao raha tsy miantso paoma?
Valiny tamin'i Luis Pantoja
ary tsy azonao ambara aminay izay hatao raha tsy miantso paoma? rehefa tsy manana an'ity mailaka ity aho?
Miala tsiny aho ry Luis, fa tsy hitako izay fomba hafa hanatanterahana izany.
Salama, manao ahoana ianao? Ny anarako dia Santiago ary mipetraka any Peroa aho, manana olana mitovy amin'izany aho ary nanandrana nifandray tamin'ny Serivisy teknikan'i Apple ary nilaza tamiko izy ireo fa tsy misy ny serivisy, azafady raha azonao atao ny manao an'io Apple io. ho anao. ataovy ny antso dia omeko anao ny fampahalalana feno, mba hamakiana fotsiny ny valin'ny fanontaniako momba ny fiarovana Apple 3, ho bonus dia homeko anao ny rakikira iray izay efa novidiana teo amin'ny iTunes Store «Jose jose - Tsara fotoana sy amin'ny fotoana ratsy ", manantena aho fa ny valinteninao, misaotra.
Tsy manana mailaka fanarenana aho ary tsy tadidiko ny valiny.
Nojereko ny pejin'ny paoma (Mexico) fa misy laharana telefaona maromaro
Ary tsy haiko izay antsoiko
Misy ve ny telefaona miasa na misy manokana ho an'ity karazana olana ity?
Salama Max, raha ny tokony ho izy dia tokony hiantso izay manohana ianao fa raha afaka ny iray amin'izy ireo dia andramo io. Any Espana ny 900 dia maimaim-poana, tsy haiko hoe iza izy ireo any Mexico
Hejmg dia hoy izy:
Manana fanontaniana aho, ny olako dia ny manova ny teny miafiko saingy toa diso ny nanoratako ary tsy afaka miditra amin'ny kaontiko intsony aho fa tsy tadidiko koa ireo fanontaniana momba ny fiarovana azoko apetraka
Valiny amin'i Hejmg
Ahoana raha any amin'ny fireneko, izay i Costa Rica, dia tsy misy toerana hiantsoana, tsy haiko hoe aiza ny isa na inona ????
Hey, tsy azoko ny manova ny valiny toy ny inona? Vonjeo haingana azafady
Nanaraka ireo dingana ao amin'ilay lesona ve ianao? Niditra avy eto ianao: https://appleid.apple.com/
Karen gtz dia hoy izy:
Miala tsiny amin'ny fanelingelenana, saingy nahatratra ny fetran'ny faharetako aho ary te-hanipy ny solosaina finday avy eo am-baravarankely.
Hitanareo, nanandrana adiny dimy mahery aho hahatsiarovako ny valiny, saingy nanadino azy ireo fotsiny aho. Ny fiantsoana ny fanohanana ara-teknika dia tsy safidy satria ny telefaona ao an-tranoko dia tsy niasa nandritra ny roa herinandro ary ny fiantsoana olona manokana toa ny findaiko dia toa tsy toa ahy. Ka manandrana mamaha ny olana amin'ny fomba hafa aho, namerina namaky ireo toro-hevitra atolotry ny Fanohanana Teknika ao amin'ny pejin'izy ireo, saingy mamela ahy any io. Ny iraisan'izy ireo sy ny fomba fiasao dia ny mila mailaka famonjena aho, saingy tsy haiko ny mampiditra azy amin'ny kaonty. Niezaka nanisy "mailaka hafa" aho, saingy tsy azoko antoka fa io dia mitovy amin'ny famonjena ary noho izany tsy manana safidy hanovana ireo fanontaniana / valiny momba ny fiarovana miseho aminao aho.
Ka miangavy anao aho mba hanampy ahy, ahoana no hanampiako an'io mailaka famonjena io voalaza etsy ambony? Mitovy amin'ny ilay solony ve? Ny teny dia tsy milazalaza ny fomba hanampianao ahy raha mamaly ireo fanontaniana ireo ianao. Miarahaba.
Valiny tamin'i Karen Gtz
Ny fomba tokana dia amin'ny fiantsoana fanohanana ara-teknika ary rehefa avy mamaly ny mombamomba anao manokana angatahin'izy ireo dia hamerina ny tenimiafinao izy ireo ary azonao atao ny manampy ny adiresy mailaka amin'ny fotoana ho avy.
Mampalahelo fa tsy tonga amiko ilay mailaka toy ny tsy fiantsoany hoe 🙁
chinodwdrums dia hoy izy:
ny olako dia tsy mandeha intsony ny mailako manavotra ary tsy afaka mampiditra mail aho mba hahafahako manome ny vahaolana
Mamaly amin'ny chinodwdrums
Chinodwdrums tsara, heveriko fa ny vahaolana dia ny miantso an'i Apple ary mitatitra ny olana.
Adris dia hoy izy:
Salama, ahoana ny momba ny AD izay avy any Mexico sy any Però izay onenako ankehitriny, nividy iPhone aho ary nanadino ny valiny ary nangataka azy ireo satria io no novidiko voalohany tamin'ity fitaovana ity, tian'izy ireo ny manisy marika ny olana dia eto aho Tsy manana signal ary ny safidin'i Peroa dia milaza fotsiny fa mifandray amin'ny mpandraharaha AYUDA POR FIS: '(
Valiny tamin'i Adris
Tsara Adris, ny hany fomba tokana dia ny fifandraisana amin'i Apple na mankany amin'ny fivarotana izay nividiananao ilay fitaovana ary asaivo manatanteraka ny fitantanana izy ireo. Nanandrana nanao an'io tamin'ny Internet ve ianao? http://www.apple.com/support/country/
Salama Namorona kaonty vaovao tamin'ny hotmail aho mba hamoronana id vaovao hidirana amina fivarotana hafa fa tsy tadidiko hoe inona ilay mailaka lehibe sy ny valin'ny fanontaniana. Manana ny mailaka fanarenana ihany aho. Saingy tsy hitako izay hatao amin'izany, satria raha miditra amin'ny App Store miaraka amin'ny mailaka fanarenana aho dia mamorona ID vaovao hafa ho ahy izany ary mila miditra amin'ilay hadinoko aho! Fantatrao ve izay azoko atao
Salama Jacqueline, mila fantatrao hoe inona ilay mailaka momba ilay Hotmail ID vaovao. Raha tsy tadidinao io mailaka lehibe io dia tsy misy ilana azy ny mailaka fanarenana.
Miarahaba, lahatsoratra tsara Manana fanontaniana aho, azo atao ve ny manova ny mailaka backup hamerenanao ny teny miafinao? Miarahaba.
Josue tsara ary misaotra tamin'ny famakiana, eny, raha azo ovaina io mailaka io amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Apple ID anao avy amin'ny safidy 'Manage account'
Ciria dia hoy izy:
Manana olana aho, tsy tadidiko ny fanontaniako momba ny fiarovana, nalefako imailaka imbetsaka izany ary tsy nisy na inona na inona tonga ary tsy nahazo ny safidy hiantsoana na nomeraon-telefaona aho. Ampianaro azafady😭😭😭 greet greet greet !! !! !! !! !!
Valiny tamin'i Ciria
Salama Ciria, nijery ny spam tamin'io kaonty io ve ianao? ho hitanao eto ny telefaona paoma http://www.apple.com/support/country/ miankina amin'ny firenena onenananao.
Salama Jordi Gimenez, manana fanontaniana aho: inona no hitranga raha te hamerina amin'ny laoniny ny kaonty icloud aho fa amin'ny kaonty hafa fa tsy apple paoma?
Mamaly an'i JuanPablo
Salama Juan Pablo, tsy azoko antoka hoe maninona aho no tsy nanao an'izany fa mieritreritra aho fa ny ID Apple dia ampifandraisina amin'ny kaonty iCloud, ka mety tsy vitanao izany.
Alin dia hoy izy:
Azafady, fa raha eo amin'ny takelaka iray aho ary tsy misy hita avy amin'ny teboka voalohany nomenao anay, dia tsy nipoitra ny "fitantanana" ary tena te-hisintona lalao aho, azafady, raha omenao ahy ny laharana ID Apple hanampy ahy izaho sa raha manana hevitra hafa ianao ??? Misaotra anao manantena aho fa manampy ahy ianao
Mamaly an'i Alin
Homenao fifaliana lehibe aho raha manampy ahy
Salama Alin, azoko tsara fa manandrana amin'ny takelaka ianao? Avy amin'ny solosaina ity fampianarana ity. Ny telefaona Apple dia: http://support.apple.com/kb/HE57?viewlocale=es_ES
Misaotra betsaka misaotra misaotra
JOSOSO OSOIRO dia hoy izy:
Salama aho nanoratra ny mailako diso raha te-hametraka WHATSAP .. Ary mangataka amiko mba hanamarina ny hahafahako miditra .. Inona no ataoko
Valio amin'i Joses OSOIRO
Dabiel dia hoy izy:
Salama, avy any Peroa aho ary manana ny olana mitovy amiko, sendra izany no nividy voalohany ahy ary manontany ahy momba ny fiarovana izy ireo saingy tsy tadidiko izy ireo ary efa nanandrana nanangana azy ireo indray aho, azoko ny safidy nefa tsy misy. tonga na spam, inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Dabiel
Julio Bolaños dia hoy izy:
Andro lasa izay dia nangalarina ny ID-nataoko Apple ary zava-dehibe amiko izany satria miresaka manokana aho na miantso ny fanohanana ara-teknika eto Venezoela dia tsy misy isa araka ny eritreritro azy araka ny eritreritro ny valiny haingana.
Valiny tamin'i Julio Bolaños
CHAVA DURAN dia hoy izy:
Q TQL, IZY RAHA MBA HANAMPY ANAO VOAO NY IDAKO, TSY AZO ATOKIN'NY SORATRA SY NY FAHAMARINANA SATRIA TSY manome ahy ny safidy ity, milaza fotsiny aho hoe voahitsoka ny IDako, handeha hamerina amin'ny teny sandoka aho raha ataoko izany. NY MAILY dia tsy manome ahy ny safidiko. TSY azoko ny mandray mailaka ary raha miala amin'ny valiny azo antoka aho dia milaza amiko fa tsy mifanaraka ny fampahalalana.
NY CERVIDOR IRAY, INONA NO Azoko atao?
Valio amin'i CHAVA DURAN
Avy any Peru inona ny isa hiantsoana? Satria tsy azoko koa ny safidy famerenana
manetrad dia hoy izy:
Jordi, ny vahaolana dia ny miantso ny Aplle
Mamaly an'i mjggcroccod
Tsy ilaina ny manompa, koa manitsy ny hevitra aho
Mahazo safidy "manampy mailaka fanarenana" aho misafidy ilay safidy ary tsy misy na inona na inona mitranga.
Salama, adinoko ireo fanontaniana momba ny fiarovana ary tsy hita ny safidy hamerenana azy ireo, inona no ataoko? Very koa ny teny miafin'ny mailaka fanarenana
Ny hany zavatra azoko eritreretina dia ny fiantsoanao an'i Apple satria raha tsy misy ny mailaka fanarenana dia ho sarotra izany.
Roberto M dia hoy izy:
Rehefa averiko ny fanontaniana dia hitako fa tsy manana fampahalalana ampy hahafahana mamerina azy ireo izy ireo, maninona no izany? ary misaotra ny fotoananao, arahaba.
Valiny tamin'i Roberto M
Salama maraina manoratra avy any Ekoatera aho mila fantatro raha afaka manampy ahy ianao. Manana iPhone 6 miaraka amin'ny icloud ahy aho saingy indray andro rehefa nangataka tamiko ny teny miafiko dia intelo no nametrahako azy ary tsy nahatratra ahy izany satria tapaka ny famantarana Wi-Fi ary nanakana ahy ho amin'ny filaminana izany, izaho tsy afaka miditra amin'ny teny miafiko ary izaho amin'ireo fanontaniana momba ny fiarovana saingy tsy tadidiko tsara ary tsy fantatro izay azoko atao. Ho fanampin'izay, ny mailaka ho an'io kaonty io dia efa antitra ary nosakanana noho ny antony ara-piarovana ary tsy tafarina intsony aho.
Mamaly an'i veronica
Ahoana ny fomba fampifanarahana ny fitaovana iOS amin'ny Wifi-Sync, amin'ny Mac
Better Rename 9, omeo anarana ho azy ireo rakitra